Umdla omkhulu kwiCybertruck, iThunyelwe ngu-Elon Musk | RayHaber
ikhayaTHE WORLDAMERICAUmdla omkhulu kwiCybertruck kunye no-Elon Musk
26 / 11 / 2019 AMERICA, THE WORLD, JIKELELE, Highway, Systems Wheel Wheel, ZOMHLATHI, VIDEO
Imodeli yovoto ye-tesla
Umenzi weemoto zombane zaseMelika uTesla wazisa imodeli yakhe entsha yeCybertruck pickup kwilori kwiveki ephelileyo. Uyilo lwesithuthi, iglasi yaphukile ngexesha lokubonisa kwakuyi-ajenda yosuku lokuqala. Ukongeza kuzo zonke ezi zinto, u-Elon Musk ubhengeze ukuba i-3 ifumene amawaka e-oda e-200 ngosuku. Ukuveliswa kobunzima beCybertruck kulindeleke ukuba kuqale ukuphela kwe2021.
Nge-tweet ekwabelwana ngayo noMusk ngeCawa, safunda ukuba iwaka le-pre-oda le-200 lifunyenwe lisuka kwiCybertruck. I-Cybertruck ibonakalise ngokusemthethweni ukuba ifumene ibango elibi ngokufikelela kule nombolo ye-oda yangaphambi kwexesha ngeentsuku ze-3.
Umphathi we-Tesla u-Elon Musk wenze intshayelelo yokuqala yemodeli yogcino zombane awayethembisile ukuyivelisa. Uyilo lwexesha elizayo i-Cybertruck ijongeka ngathi iyimoto e-armored. Ngexesha lokubonisa, lavavanywa ukuba lizinze. Kwinqanaba, uyilo oluphambili lukaTesla uFranz von Holzhausen waqala ngokubetha uCybertruck ngepikniksi yombane ene-sledgehammer. Akukho monakalo ushiyekileyo emva kwempembelelo ekusebenzeni kwezithuthi.
Nangona kunjalo, izitshixo zomoya eziye zaphuka ngexesha uyilo kunye nokunyusa imoto kusephakathi kwezona sabelo zithuthi zisebenzayo kwi-Intanethi. Nangona iifestile bezingaphukanga ngokupheleleyo, zadilizwa. Kwacaciswa ukuba iifestile zale moto yomeleleyo bezingaqubeki. UMusk akazange alinde esi siphumo, wathi iglasi akufuneki yephule kwaye uvavanyo aluphumelelanga.
Ukuze abathengi bangaphambi kweCybertruck kufuneka bahlawule idipozithi yeedola ze-100. Unyaka wokuveliswa kwesithuthi yi2021. UMusk wabelwe kwimithombo yeendaba zentlalo ukuba i-146 iwaka ipesenti ye-42 engamawaka amabini eyinjini yeCybertruck, i-41 iyinjini ye-tri-injini kwaye i-17 iyinjini enye. I-Cybertruck 39 amawaka ama-900 amaxabiso aqala kwi- $. Olona hlobo oluphezulu lwexabiso lemoto yi-69 amawaka eedola ze900. Iphakheji ye-single-injini ye-40 yamawaka-eedola enye inodidi lwe-400 km.
I-500 enenjini yayo ene-injini ezimbini kunye ne-drive-wheel-drive inika uluhlu olusondele km, kwaye i-50 inokuthengwa ngethegi yexabiso ledola eziliwaka. Elona xabiso liphezulu leemoto ze-800 zemayile ye-3 kunye nohlobo lwamavili amane exabiso lentengo ye70 amawaka eedola athe. I-500 enenjini yayo ene-injini ezimbini kunye ne-drive-wheel-drive inika uluhlu olusondele km, kwaye i-50 inokuthengwa ngethegi yexabiso ledola eziliwaka. Elona xabiso liphezulu leemoto ze-800 zemayile ye-3 kunye nohlobo lwamavili amane exabiso lentengo ye70 amawaka eedola athe. Ukukhawuleza kwale nguqulo ukusuka kwi-0 ukuya kwi-100 km yimizuzwana nje ye-2.9. Abo bafuna le nguqulo iphezulu kuya kufuneka balinde omnye unyaka.
UTesla uya kukhetha ngokongeza iphakheji yokuqhuba ezimeleyo kuzo zonke iimodeli zepuzzle. Abo bafuna ukuqhuba bazimeleyo kwi-7 kuya kufuneka bahlawule ngaphezulu kwewaka leedola. Kwinkcazo-ntetho yakhe, umphathi we-Tesla ukhumbule ukuba ezintathu zeemodeli ezithengiswa kakhulu e-US zizi-pickups.
Ride i-Elon Musk ye-Ultra-Fast Hyperloop kuphela kwiiRandi ze-1
3 evela ku-Elon Musk. Isicwangciso esibalulekileyo kwisikhululo se-moya!
Inomdla kakhulu kwixesha
Intshisekelo enkulu kwiiHaydarpaşa Book Days
I-TCDD kwi-2 R & D ye-Summit yeNgqungquthela kunye noMboniso…
Inomdla omkhulu kwisimo sikaTÜDEMSAŞ kwiSivas Values ​​Fair
Intshisekelo enkulu kwiiprojekthi ze-Antalya eKatar
Inzala enkulu evela kwiiFiji ezinkulu
Ukususela kwiVeki yokuQala ukuya kuTshintshelo lweBalance phakathi kweeProll…
Ukusuka kuLoliwe ukuze aye kuKhethekileyo ukuKhangelwa kweFilimu yaseHostman…
I-Tünektepe Intambo yeChethane e-Antalya
Intshisekelo enkulu kwiZindwendwe ze-Zonguldak-Karabuk
I-Istanbul eNtsha kwiSikhululo seNtengiso yeendawo ngeentengiso Yoğun
Inzala enkulu kwi-TCDD Yima kuma-InnoTrans
TCDD 3. Inzala enkulu kwi "Atatürk Wagon" kwiNgingqi
Namhlanje kwimbali: 27 Novemba 1892